Home Siyaasadda Xildhibaankii lagga xayuubiyay xubinimaddii Barlamaanka hadane billaa xasaanad suuqyadda wareeggaa.
Xildhibaan horre Abdulqadir Mohamud Owbakar Dhagaweyne wuxuu ka mid ahaa xildhibaanadda Maamulka Hirshabelle markii horanne si afduub ah Xildhibaan ku noqday ayaa hadda muujaddo siyaasaddeed ku furmeen waanna mid waxba lagga qaban karrin meel waliba uu garab weydiistane uu ka heli waay wax caawinaad ah .
Jifadda uu ku meteli jirray kursiga Xildhibaanimo ayaa is hortaag ku sameysay dacwadne ka gudbisay madaamma uu ahaa markii hore mid kalsoonni ka heysay Qabiilka kursiga iskalleh waxaa lalla xiriiray Gudoomiyaha Gollaha Barlamaanka Hirshabelle Abdihakim Luqmaan loonna sheegay Xildhibaan horre Dhagawayne inuusan Qabiilka kursiga iskalleh wax kalsooni ah uusan ka heysan marnabana raali ka aheyn innuu ku matallo Hirshabelle xildhibaan Abdulqadir Owbakar Dhagawayne.
Dacwadaas kadib waxaa Mogadishu iyo Beletweyne ka kalla qabsoomay labba shir oo aad u waweyn waxaanna iskuggu immaaday dhalinyarta aqoonyahanadda ganacsatadda iskalleh kursiga uu ku fadhiyay Xildhibaan horre Dhagawayne waxaanna leysku afgartay in si toss ah loolla xirriiro Madaxweynaha Maamulka Hirshabelle Ali Guudlaawe Hussein .
Nasiib wanaag waa laggu guuleystay in lalla kulmo Madaxweynaha Hirshabelle Ali Guudlaawe Hussein in kasto uu safar u ahaa Dalka Turkey-ga waqti maddan muusan qaadan in losheego wax waliba iyo sidda wax u jiraan hadalka waxaa furray mid ka mid ah nabadoonaddii hogaaminaay Abaabulka laggu diidanyahay Xildhibaan horre Dhagawayne.
Nabadoonka Wuxuu ku billaabay hadal .
” Madaxweyne soo dhowoow sharaf iyo karaamo korkaadda ha ahaato waxaan dacwad ka nahay Xildhibaan isku sheeg lagunna magacaabo Abdulqadir Mohamud Owbakar Dhagawayne sababaha Dacwada aan ugga nahay waa hal illaa todobo qodob .”
1: kalsoonidda xubinimo ee Barlamaanka Hirshabelle maannan siin markii horre si boob iyo tuuganimo ku jirto ayuu ku gallay Gollaha.
2: laba Sano ayuu dhax fadhiyaa Gollaha wax natiiyo ah oo lataaban karro ma uusan ka keenin innuu Deegaan iyo Dad metello maba oggo .
3: Aqoon Amma qibrad siyaasadeed umma laha Barlamaanka manna fahansano waxa ka socdo.
4: maaha shaqsi wax bartay Dugsi hoose dhexe sare manna ku aamini karno mustaqbalkeenna .
4: waa qowsaar u shaqeeyo Madaxweyne
ku-xigeynka Hirshabelle Yousuf ahmed Hagar Dabgeed manna ahan shaqa Xildhibaan arintaas.
6: waa shaqsi ganaax horey uggu dhacay kanna qeyb geli karrin Golla Barlamaanka illaa 4 Kal fadhi mana laha wax xaquuq ah .
7: waa shaqsi aad uggu weyntahay qabyaaladda kallana saarsaaro qabiilka kursigoodda sidda xatooyadda leh uu ku qaatay .
“Madaxweyne waxaan kaa codsaneynaa si sharaf leh innaad ixtiraamto tan Qabiilka iyo midnimada Maamulka Hirshabelle si ixtiram leh.”
Madaxweyne Ali Guudlaawe Hussein wuxuu ku jawaabay asigoo soo gaabiyay hadalka .
“ku bishaareysta innaan idinka aqballay dhamaan codsiga aad isoo gudbiseen waanna arrin uu Qabiilka xaq u leeyahay innuu kalsoonidda kalla laaban karo xildhibaankii aay u arkaan innuusan ku meteli karrin Gollaha Barlamanka Hirshabelle si waliba oo eey ahaato.”
Wuxuu intaa ku darray madaxweynaha Hirshabelle Ali Guudlaawe Hussein innuu laxiriiri doonno Gugoomiyaha Barlamanka Abdihakim Luqmaan oo horey Dacbadda Xildhibaan horre Dhagawayne u gaartay xurgof horane ka dhaxeysay jaanisna ku raadinaay.
Muddo kadib waxaa xiriir lalla sameey gudoomiyaha Barlamanka Hirshabelle wuunna aqballay codsigii hore iyo kii ka soogaaray madaxweynaha wuxuunna sheegay in ladiyaariyo shaqsi aqoon iyo waaya arragnimo leh lagu bedelo Xildhibaan horre Dhagaweyne.
Dhalinyaradda iyo ganacsatadda waxaa aay baaddi goob u galleen shaqsigii laggu bedeli lahaa Xildhibaan horre Dhagaweyne waxaanna lasoo hellay labba shaqsi oo kalla ah Shariif Sharaawe iyo Issa Dheere oo labaduba ah labbo aqoonyahay kanna soo dhallaali karro masuuliyaddaas cullus lagunna qanci karro labadaas aqoonyahan mid ka mid ah lagunna magacaabo Shariif Sharaawe horey ayuu uggu tartamay gurisiga balse si afduub iyo qiyaano ku saleysan ayaa loogga xoogay kursiga .
Dadka yaqaano Xildhibaan horre Dhagaweyne kumma sheeggaan sifo wanagsan xataa marka lafiiriyo reer Hiiraan waa shaqsi aad iyo aad u dhibsadaan dhowr jeer oo hore hadallo Xanaf leh ayuu media-ha u marsiiyay manna arki karraan dhamaan reer Hirshabelle ayaa soo dhaweeyay in lagga eryo shaqadda Xildhibaan horre Dhagaweyne waanna tilaabo ifafaallo u ah in aay dhalato Hirshabelle lawadda leeyahay .
Xogta waxaan la helnay mid ka mid ah milkiilaaysha kurisiga iska leh unna waramay Radiohalgan.com
Maxaa kaagga baxay
Previous articleMadaxweynahii Koowaad ee DG Hir-shabeelle Dr.Cali Cabdullaahi Cosoble ayaa yiri Xawaadle waa inuu sugo ammaanka Maamulka Gobolka Hiiraan (Wax badan ka ogoow)
Next articleMD Xasan Sheekh oo sheegay in DFS wadin abaabul ka dhan ah Maamulka Koonfur Galbeed
radiohalgan.com June 2, 2022 At 1:00 am